ပြည်ပမှာလည်း အောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
စင်ကာပူသင်္ကြန် ဖျော်ဖြေရေး အတွေ့အကြုံတွေပြောလာပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းက ပရိသတ် ၅၀၀၀ ခန့်ရှိတဲ့ စင်ကာပူသင်္ကြန် ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး သီချင်းတွေဆိုခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ပြောပြလာပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံမှာ ဒီလိုပရိသတ်အများကြီးနဲ့ ဖျော်ဖြေရတာ သူ့အတွက် ပထမဆုံးပါတဲ့။
စိုင်းစိုင်းကတော့ လက်ရှိမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့အတူ စင်ကာပူသင်္ကြန်ကို ပျော်ပျော်ပါးပါးဆင်နွှဲနေပါတယ်။ အားပေးသူ ပရိသတ် ၅၀၀၀ ခန့်နဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။
‘’မနေ့က စင်ကာပူမြို့လယ် Marina Bay က The Lawn မှာ အနည်းဆုံး ပရိသတ် ၅၀၀၀ ရှိတဲ့ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလောက်များတဲ့ လူအုပ်ကြီးအတွက် လုံခြုံရေး ငါးယောက်ပဲ ငှားထားတာပါတဲ့ သူတို့ကလည်း မတော်တဆ အတွက်ပဲ အသင့်နေနေတာဖြစ်ပြီးတော့ တကယ်လည်း ဘာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမှ မရှိခဲ့ပါဘူး’’ ဆိုပြီးတော့ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ ကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် စိုင်းစိုင်းက ပြည်ပနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေထဲ ပရိသတ် ၅၀၀၀ အင်အားရှိတဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲမှာ သီဆိုရတာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာ ဒီလောက်များတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို ဖျော်ဖြေဖူးတာ ဒါပထမဆုံးပဲ။ Thank you Singapore !!pWe really hadagood time !! Love you’all , peace’’ ဆိုပြီးတော့ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
စင်ကာပူသင်္ကြန်ပွဲမှာ ဖျော်ဖြေရေးတွေနဲ့အတူတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး ရေကစားခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအပြင်၊ အမှိုက်တွေကို ရှင်းလင်းပေးတဲ့ အဖွဲ့လည်း ရှိသေးတယ်လို့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
‘’ပရိသတ်တွေကိုကူညီဖို့ လူငယ် Volunteer တွေလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲပြီးတာနဲ့ အဖြူရောင် ပရဟိတအဖွဲ့က ပွဲခင်းတစ်ခုလုံးကို ပြောင်သလင်းခါအောင် ကူညီရှင်းလင်းပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ စီစဉ်တဲ့ Myanmar Club ရယ် တက်ရောက်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်ရယ် ပံ့ပိုးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ Sponsor တွေရယ် ကူညီတဲ့ လူငယ်မောင်မယ်များရယ် အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ Frenzo Artists များမှ ကျေးဇူးတင်ဦးညွတ်ပါတယ် ခင်ဗျား’’ လို့လည်း ဆက်လက် ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။